အမှတ်မထင် ဈေးရောင်းချင်သည် - Neoxian City
သူများတကာတွေ ရေးလိုက်ကြတာ ဟောတစ်ပုဒ် ဟောတစ်ပုဒ်နဲ့ အားကျလိုက်တာနော်။ ကျွန်တော့မှာတော့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရန် ညှစ်ထုတ်ရသည်မှာ ဝမ်းချုပ်လူနာထက်ပင်ဆိုး၍နေသည်။
ကဲပါလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာတစ်ပုဒ်တော့ဖြစ်အောင်ရေးမယ်ဆိုပီး ကီးဘုတ်ပေါ်လက်တင်ကာ စဉ်းစားနေရသည်က ကြောင်တောင်တောင်နှင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာသွားသည်၊ စာက တစ်လုံးမှထွက်မလာ။
တစ်ယောက်တည်း ယောင်လည်လည်နှင့်ရှိနေစဉ် အိမ်ရှေ့ဆီမှ မဟေသီက လှမ်းခေါ်သည်။ "ကိုရွှေ- ဒီမှာ အလုပ်တွေရှိနေတာ တော့စာရေးတာ ခဏရပ်ထားအုန်း လာကူအုန်းတော့"။ အင်း မယက ခေါ်လိုကခေါ်ကြစေ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် အပေါက်အလမ်းက ဒီတစ်ခုသာရှိတော့၍ မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်ရပေအုန်းမည်။
"အေး-လာပါပီဟ" ဆိုကာ ထသွား ကီးဘုတ်လေးမှာ သခင်မှရှိ ငိုမဲ့မဲ့နှင့်ကျန်ရစ်ရှာသည်။
"ဘာတွေလုပ်စရာရှိလို့လဲဟ၊ ဈေးကလဲ အရောင်းပါးလိုက်တာ လွန်ပါရော"
"အသာနေပါ ကိုရွှေရယ် ခုနကမှ ကျေးဇူးရှင် ရန်ကုန်က ဦးဇင်းဖုန်းဆက်တာတော့၊ လဖက်နှပ်ကလေးများ ပါဆယ်ပို့ပေးပါဆိုလို့ ပို့ပေးပါမယ်ဆိုပီး အလုပ်လက်ခံလိုက်တာ၊ လာ- လက်ဖက်နှပ်ကူလုပ်ပေး" "အေးလေ ဈေးရောင်းမကောင်းဖြစ်လို့ အိမ်မှာနေနေရတာ ခုလို ဖုန်းနဲ့ အမှာပါးတော့လဲ လုပ်ရမှာပေါ့"။
သို့နှင့် လင်မယားနှစ်ယောက် လဖက်နှပ်ခြင်းအား တက်တက်ကြွကြွ ပြုလုပ်ကြချေ၏။ "တော့မှာ စာရေးစရာ မရှိဘူး ခဏခဏညည်းနေတာ အခုလို လက်ဖက်နှပ်တဲ့အကြောင်းစာစီရေးပါလားတော်" မဟေသီ၏ အားပေးလမ်းပြပေးမှုကြောင့် အတွေးထဲတွင် လင်းခနဲဖြစ်၍သွားရ၏။ ဟုတ်ပေသားပဲ ဒီလိုအလုပ်အကြောင်းတစ်ခါမှ စာတစ်ပုဒ်မရေးဖူးသေးဘူး။ "အေးဟ အလုပ်ပီးမှ စာလေးတစ်ပုဒ် ရေးရအုန်းမယ်၊ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မိန်းမရာ၊ အခုမှ စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းရတော့တယ်ဟ"။
သို့နှင့် လဖက်နှပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အထုပ်အပိုးပြင်ဆင်ခြင်းများ အားလုံးပြီးစီးတော့ အစဉ်လိုက် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံရိုက်ထားသည်တို့အား ပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသည်။ ဒီပုံလေးတွေ စာရေးတဲ့ထဲထည့်ပေးမည်ဟု မဟေသီကို ချော့ရလေသည်။
ကျွန်တော်များ မိသားစုသည် လက်ဖက်နှင့် ပဲကြော်စုံ ဆိုင်လေးနှင့် ရပ်တည်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ချေပီ။ လုပ်ငန်းလုပ်လာသည့်တလျောက် မသမာစီးပွားရှာခြင်း အလျဉ်းမရှိခဲ့ချေ။ ကျွန်တော်မှလည်း မချမ်းသာချင်နေပါစေ မိမိတို့ စားသောက်ကုန်အား ဝယ်ယူအားပေးကြကုန်သော ဈေးဝယ်ဖောက်သည်တို့အား ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ရသွားစေချင်သည်။
လဖက်နှပ်လျင်လည်း သူများတကာလို ဓါတုအချဉ်များမသုံး၊ ဓါတုဆေးဝါး မပုပ်ဆေးများကိုမသုံးပဲ သဘာဝအတိုင်း လက်ဖက်ကို နှပ်၍ပေးသည်။ အချဉ်အတွက် သံပုရာသီးကို ကိုယ်တိုင်ညှစ်ကာ သုံးသည်။ ငရုပ်သီးဆိုပါကလည်း ရေစင်အောင်ဆေး၍ လိုအပ်သလို စက်ဖြင့်ကြိတ်ချေရသည်။ လက်ဖက်ကိုလည်း ရေစင်အောင်ဆေးကာ သေချာညှစ်၍ ရေမပါစေရန် ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပေးသည်။ လက်ဖက်နှပ်သည် ရေမစင်ပါက ရက်ကြာကြာအထားမခံ ပုပ်သွားတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သော ဝိသမလောဘသားတို့က လက်ဖက်နှပ်အတွင်း မပုပ်ဆေးများထည့်ကြလေတော့သည်။
အခွင့်အခါကြုံလျင်တော့ မြန်မာဟိုက်အဖွဲ့သားများကို လဖက်နှပ်ဘူးမျာအားး လက်ဆောင်အဖြစ် ပို့ပေးချင်ပါသေးသည်။ ယခုအချိန်အခါတော့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သေး၍ ပို့မပေးနိုင်သေးပါ။ အားပေးလို၍ အော်ဒါမှာပါက စေတနာရှေ့ထားကာ အရသာအထူးကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ပို့ပေးပါမည်။
သဘာဝအတိုင်း ဆိုးဆေး၊ ဓါတုဆေးမပါဝင်ပဲ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချလက်ချသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ယခုပုံများမှာ ရန်ကုန်မှဦးဇင်းတစ်ပါးသည် ကျွန်တော်များထံအမြဲအားပေးလျက် မှာယူထားသော လက်ဖက်နှင့် ပဲကြော်စုံများအား ယနေ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားသော အထုပ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုလို အကြပ်အတဲဖြစ်နေချိန် မှာယူအားပေးသော ဆရာတော်ကျေးဇူးရှင် ဉီးဇင်းလေး ကျန်းမာသက်ရှည်၍ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆထက်တံပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာ။
hive-122133 foodie proofofbrain trafficinsider creativecoin neoxian palnet writing blog hive-list
ဈေးရောင်းပိုစ်လဲ ဖြစ်တာပဲနော် !LOLZ
@nyinyiwin(1/1) gave you LUV. | wallet | market | tools | connect | <><
ဟုတ်ပ ကြုံသလို ဈေးရောင်းရတာပေါ့။ !LOLZ
@viviankay00(2/9) tipped @nyimwa (x1)
လာစရမလိုပါဘူးဗျာ လှမ်းသာမှာလိုက်ပါ အိမ်အရောက်ပို့ပေးမယ် :D !LOLZ
ရိုးရာလက်ဖက် စားချင်စဖွယ်ပါဗျာ။ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလှပါစေ။
အရွက်မှာ လက်ဖက်တဲ့ဗျာ။ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ။ !LOLZ
@sayalu, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa
ကိုရွှေဘို အကြော်စုံကို အချိုမှုန့် မထည့်တဲ့ အကြော်စုံ လိုချင်ပါတယ်။ ရနိုင်ပါ့မလား။ ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ အကြော်စုံတွေက အချိုမှုန့် အတောင့်လိုက် တွေ့နေရလို့။ နယ်ဝေးဆိုရင် ဘယ်လောက်ဖိုး မှာရင် ပို့ပေးသလဲ..? !PIZZA
ကျနော်တို့ ပဲကြော်စုံက အချိုမှုန့် မပါဝင်ပါဘူး သဘာဝ ပဲကြီးကို ကြော်ထားခြင်းပါ။ အကြော်ဖိုကို အပ်ရင်တော့ သူတို့ဆီကိုမကြိုက်ရင် ကို့ဆီပေးကြော်ခိုင်းရတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ကတော့ ပဲဆီစစ်စစ်ကို မသုံးနိုင်တော့ ပဲစပ်ဆီဆိုတာကိုသုံးပါတယ်။ ၁ ပိဿာကို ၆ထောင်နဲ့ ရောင်းချနေပါတယ် အကိုလိုသလောက် ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ အသေးစိတ်ကို အကို့ CB ကနေ ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။
အခုမှာချင်သော်လည်း နောင်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မှ မှာစားတော့မယ်အစ်ကို...!PIZZA
အဆင်ပြေတဲ့ချိန် အားပေးပါဗျာ ကျေးဇူးပါ။
အမေ တို့ အဒေါ်တို့ကိုလည်း ကြော်ညာပေးထားပါမယ်ရှင့် !PIZZA
ကျေးဇူးပါဗျာ အားပေးနော် ။